(CEO မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
↑ Markus Menz (2011-10-04)။ Menz, M. 2012. Functional Top Management Team Members: A Review, Synthesis, and Research Agenda. Journal of Management, 38(1): 45-80။ Jom.sagepub.com။ 2012-11-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမှုဆောင်_အရာရှိချုပ်&oldid=638598" မှ ရယူရန်
၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၃၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။